Gadziridza mitengo neBig Data - NewGenApps
Big Data, Big Data Analytics, Kufanotaura Ongororo
Kune zvinhu zvakasiyana zvinokonzeresa mumitengo yemitengo - chinhu chemutengo, zvinokwikwidza, mutengo unozoshandiswa nevatengi. Kuongorora hwakawanda-hwakatenderedza mhando yemitengo zvinhu zvinogona kumisikidza kukunda kwevatungamiriri kumasangano makuru emabhizinesi ane mazana kana zviuru zvezvinhu mumabhuku avo.
Nhasi, vanoita sarudzo vanogona kushandisa hombe dhata, kuwanikwa kwedata, uye predictive analytics nzira dzekugadzirisa pane dzakasarudzika mutengo sarudzo. Vatungamiriri vanogona kushandisa makuru madhijitari ekuziva iwo mitengo yemitengo iyo inogona neimwe nzira kana imwe kuregeredzwa.
Iyo kiyi yekukura yakazara mari ndeye kutora dhata yacho kuti uwane yakanakisa mutengo wechinhu chako.
Nei Big Dhata
Big data yakavakirwa pasainzi. Iyo inoshandisa software iyo inogona kushandisa zvine hungwaru kushambadzira sarudzo kune yega yega yezvigadzirwa mune yesangano chigadzirwa mhando zvisinei nezve chigadzirwa huwandu.
Big data inogona kuchinja vanoita sei sarudzo-vanoona nyaya dzebhizinesi uye nekupa zano sarudzo dzakakosha, zvichivagonesa kuvimba neruzivo rwezvinangwa. Dhata hombe, kuongorora kwakadzama, uye ruzivo runobatsira zvinhu zvekudzikisira njodzi, kugadzirisa zvisarudzo zvakakosha zvakagadziriswa uye kukwikwidzana nevamwe.
Makambani ari kushandisa sei Big Data
Pakutanga mabhizinesi anongowedzera mitengo sekuenderana nezvinhu zvisina basa, semuenzaniso, mutengo wekuvaka chigadzirwa, mitengo yezvinhu zvakafanana zvigadzirwa, zvakajairika margins, nezvimwe. Ivo vanotevera nzira dzekare dzekubata chigadzirwa mitengo sezvavagara vachiita.
Asi mazuva ano, masangano anoshanda mumabhizinesi ese ari kubatsirwa kubva kuinfo iyo data hombe ravanopa kwavari. Dzidzo-inotungamirwa nedzidzo dziri kubatsira masangano mukutsvaga zvakawanda nezvenzira dzevatengi vavo dzekushandisa mari uye kushandisa yakatarwa mitengo yemitengo kuzvinhu zvavo kuti vadzore mari yepamusoro yemari kusangano ravo.
Kune chimwe nechimwe chinhu, masangano anofanirwa kuve nekwaniso yekutsvaga iwo chaiwo mutengo uyo mutengi achabhadhara. Munyika chaiye, vangatarisira mune zvakasarudzika zviitiko zvinogona kukanganisa mutengo. Semuenzaniso, mutengo weinotevera chinhu chakakwikwidza chinhu maringe nemutengo wechinhu chakapihwa mutengi - uye zvichizosvika kune zvakanakisa mutengo. Pasina kupokana, kune sangano rine chitsama chezvinhu, iyi mhando yekukoshesa nzira iri nyore.
Inenge makumi manomwe neshanu muzana yemari yesangano inotangira pazvinhu zvayo zvakajairika, izvo zvinowanzo kuverengera zviuru. Inonetesa, echinyakare maitiro ekumisikidza mutengo anoita kuti zvive zvakaoma kuona iwo mitengo yemitengo iyo inogona kuvhura kukosha.
Izvo zvinonyanya kukunda masimba makuru, zvichiita kuti zvikone kuwana gritty uye kubata nekukanganiswa kwezvinhu izvi zvemitengo, izvo zvinogara zvichichinja, kune huwandu hwakawanda hwezvinhu. Pakati payo, iyi inyaya hombe yedhata.
Kuchinja Big Data muRevenue
Nepo mazhinji emafemu mahombe ari pakati pekukomberedza kuita analytics uye hombe data hwaro, vazhinji vanofanirwa panguva imwe chete kushandura matekiniki avo ekugadzirisa mutengo. Kana masangano anogona kuputsa kuyerera kwakanyanya kwedata kuri kuunganidzwa nemaseva avo, vanogona kutanga kugadzirisa mashandiro avo kune izvo ruzivo uye nzwisiso yavo yezvehupfumi inozivisa kwavari nezve izvo zvinonyatsodiwa nevatengi.
Matanho matanhatu ekuongorora dhata hombe zvinobudirira -
Kutanga neimwe nyaya yebhizinesi kugadzirisa.
Kuongorora kuora mitezo kunowanzoitika nekuda kwekuyedza kuita zvakanyanyisa zvese pane imwe nguva. Asi nekutarisa pachinangwa chimwe chete chekutanga, vatengesi vanogona kukomberedza kutarira mibvunzo inoreva zvakanyanya kusimudzira manejimendi manejimendi.
Tsvaga mazano akakosha ekutanga kuhwina.
Kukunda kwekutanga kunozoita kuti sangano rese rione mukana wekusanganisa ruzivo muzviitiko zvavo zvakajairika. Funga nezve kudzidza indasitiri nzwisiso uye analytics inosanganisirwa kusimudzira nguva yemutungamiriri pakuona.
Masangano akanakisa eB2C anonzwisisa mashanduriro nekutevera kuwanda kwedata ravanaro, asi masangano eB2B anokwanisa kudzora data kusiyana nekuishandisa pakutyaira sarudzo.
Great analytics inogona kugonesa masangano kuti aone kuti misiyano inogara isingatariswe sei, semuenzaniso, yakanyanya kuwanda yezvigadzirwa, mamiriro emari, uye mutengesi wekutengeserana - kufumura izvo zvinotyaira mutengo kune ese mutengi chikamu uye chigadzirwa.
Iyo inotora nguva-inodhura uye inodhura, ichiita kuti zvikonere kuongorora nemawoko nhamba hombe yezvinhu. Zvoga zvimiro inogona kucherechedza zvikamu zvakatemerwa, fungidzira izvo zvinotyaira mutengo kune wese munhu, uye zviyero izvo zvine yakanyorwa kukosha-based data.
Izvi zvinogonesa masangano kumisikidza mitengo yezvisumbu zvezvinhu uye zvikamu maererano nedata. kushandisa michina Isuwo zano rinoita kuti zvisanyanya kudzvinyirira kutevedzera nekushandura analyses, saka hazvisi zvakakosha kugara uchitanga kubva pakutanga.
Batsira Yako Yekutengesa Chikwata
Zviripachena, hombe dhata mhedzisiro pamitengo maitiro ichave asina basa mune chiitiko iwe usina iyo rubatsiro rwekutengesa kwako reps. Sangano riri kushandisa dhata hombe rinofanira kusendeka nguva yekushanda pamwe nekutengesa kwavo reps uye nekuvapa tsamba yakazara mune chero shanduko zvinoenderana nemutengo system. Vachazoda kunyatsodzidziswa kumashure kwekuti nei panga paine shanduko yemitengo uye positives iyo yavanofanirwa kuve nekwanisi yekupfuudza kune vanogona kutenga.
Nekudaro, masangano anofanirwa kushanda pamwe chete nezvikwata zvekutengesa kujekesa zvinangwa zviri kumashure kwezano rekutengesa uye mashandiro anoita masisitimu saka vanovimba nemitengo yakakwana yekuzviisa kune vatengi vavo.
Muzviitiko zvakakura masangano anoisa pfungwa shoma pakusiyanisa zvikamu zviri kukundikana kutarisira zvazvakanakira sezvo mikana irikukwira inowanzo bata zvinhu zvinopa kurasikirwa. Asi zvakakosha muhupfumi hwepasi kuti uzive vari pasi pevatambi kuitira kuti iwe ugone kuziva kuti nei vamwe vatengi kana zvimwe zvigadzirwa zvechigadzirwa zvingatorere sangano rako. Gadzirira kurasa zvese zviri zviviri kana zvichikosha!
Fungisisa pane kugutsikana kwevatengi
Sarudzo yese yekutenga inofanirwa kuve isinganetsi kuita. Vimbisa kuti vatengi vako vanobvuma kuti uchave uripo kuti upe yakanakisa rutsigiro rwevatengi - uye ramba uchipa iro rakakura basa rese kuburikidza nehupenyu hwetarisiro yesangano.
Iyo mitengo yemitengo software ine chigadzirwa chekuongorora chigadzirwa chinotsigira kuvimbika kwevatengi uye kuwedzera hunyanzvi, kumhanyisa maitiro ekuronga uye kubatsira kuziva chinotsiva chigadzirwa zvigadzirwa zvinogona kusangana zvirinani nemutengi bhajeti kana zvinodiwa.
Kuongorora uku kunobatsira kucherechedza vatengi vanotenga zvinhu zvakasiyana siyana muzvikamu zvakasiyana zvezvinhu Boka rako rebhizimusi richava nebhenefiti yekugona kuita mupiro wepakeji, chitoro chimwe chete chevatengi, uchifunga nezve kutengesa-kutengesa uye kumusoro-kutengesa mikana .
Tichifunga nezve yakadzama data pamusoro pechigadzirwa mutsetse purofiti uye vatengi, kutengesa uye mitengo yemitengo inogona kushandisa hombe dhata kuti ione mikana yekukosha kwemitengo yekugadzirisa. Mutengo pasi uye priling yemutengo inogona kuwanikwa kumisikidza yakanaka-yakayerwa mitengo uye mazano kune mumwe mutengi.
Inoita kuti vashandisi vakurumidze kunzwisisa kukosha kwevatyairi nekunzwisisa iwo mukuru maitiro ezvese zvinoderedzwa, manejimendi, zvinokurudzira, uye zvirongwa zvekushambadzira.
Maonero acho anogona kushandiswa kugadzirisa mukurumbira pazviteshi uye kushandisa shanduko dzakangwara kana dzakakosha mumitengo. NePengo Analytics, masangano anokwanisa kugara achiongorora, kuongorora, uye kunatsiridza nzira dzemitengo yekuwedzera miganhu yepamusoro uye mibairo.
Nekudaro, iro zano, zviripachena, kuseri kweizvi zvese uye chikonzero nei Big Data kana Kuongorora kweMutengo kuchikosha kumabhizimusi ndechekuti neruzivo rwakawanda, tinogona kugadzira sarudzo dziri nani pamusoro pekushandisa kwedu mari. Uye, isu tinokwanisa kuisa iyi data kutitsigira isu kutengeserana zvakanyanya, uye pamwe, kuwana mari yakawanda.
Uri kutsvaga Big Data uye Analytics kuitiswa kwesangano rako? Taura nekutaurirana